Wesley Sneijder oo kala taliyey Martínez arrimaha ku saabsan inuu ku biirayo kooxda Barcelona – Gool FM
(Yurub) 05 Juun 2020. Xiddigii hore xulka qaranka Holland iyo kooxda Inter Milan ee Wesley Sneijder ayaa kala taliyay Lautaro Martínez heshiiska uu ugu biirayo naadiga Barcelona suuqa xagaaga ee soo socda.
Haddaba Wesley Sneijder ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr ah waxaana uu yiri:
“Waxaan noqon lahaa sida Messi ama Ronaldo, laakiin waxaan doorbiday inaan ku raaxeysto nolosheyda in ka badan Cristiano iyo Lio”.
“Aad ayey uga duwan yihiin kuwa kale sababtoo ah waxay sameeyeen wax badan ee xirfadooda kubadda cagta ah… inkastoo ay sidaas tahay, balse marka loo fiiriyo shaqadeyda waxay aheyd wax layaab leh”.
Intaas kaddib Wesley Sneijder ayaa wuxuu ka hadlay wararka Lautaro Martínez la xiriirinayo kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“Waa ciyaaryahan aad u wanaagsan laakiin waa inuu sii joogo dalka talyaaniga, wuxuu noqon karaa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican adduunka, laakiin marka hore waa inuu Inter Milan kula guuleysto koob”.
“Mar walba waxaa jira waqti munaasab ah ee aad wax walba ku sameyn karto, dabcan wuxuu ka ciyaari karaa Barcelona, laakiin waa hadii uu runtii doonayo inuu baxo, haddii aan booskiisa joogi lahaa waxaan ku biiri lahaa Real Madrid”.